Soo -saaraha Dhegaha ee Bluetooth iyo Jumlada Jumlada | BWOO
Waxyaabaha: Siligga Copper
Nooca Bluetooth: V5.0
Fogaanta Bluetooth: 10M
Awoodda la qiimeeyay: 3mw
Awoodda batariga: 130mAh
Haddii aadan waligaa hore u lahayn lammaane dhegta Bluetooth ah, waa kuwan 5 sababood oo ay tahay inaad runtii ogaato sida hoos ku qoran:
• Isticmaalka gacmo-la'aanta ah, welwel ammaan ma leh.
• Waxay kaa dhigaysaa mid diirada saaraya, Ka dhig taleefankaaga inuu ku furmo aalado lagu kalsoon yahay.
• Wuxuu caawiyaa hagaajinta wax -soo -saarka, Nolosha baytarigu waa weyn tahay.
• Isticmaal-saaxiibtinimo, Tayada codka iyo xasiloonida isku xirnaanta ayaa aad loo hagaajiyay.
• Faragelin hoose, koodhadh Bluetooth oo tayo sare leh ayaa soo maray waddo dheer.
Nooca Bluetooth V5.0
Fogaanta Bluetooth 10M
Awoodda baytariga 130mAh
Waqtiga shaqada 6H
Dareenka -42 + / - 3dB
Midab Madow, caddaan
Nooca Qalabka dhegaha ee Bluetooth 5.0
Taleefoonnada dhagaha leh ma taageeraan astaantan sababtoo ah ma awoodaan inay wax ku baahiyaan taleefankaaga. Laakiin haddii aadan ku jirin xargaha jirdhiska ama wax kale oo la gashan karo, waxaad weli ku raaxeysan kartaa faa'iidooyinka Aaladaha Aaminsan adoo siinaya Earpod -kaaga Bluetooth awood uu taleefankaaga ku furo. Oo haddii aad tahay nooca ilaaliya dhagahaaga ama dhegahaaga ama qoortaada mar walba sida aniga oo kale, Aaladaha la Aaminsan yahay waxay noqon karaan kuwa badbaadiya waqti badan maalin kasta.
Earpod -ka Bluetooth wuxuu ku shaqeeyaa asal ahaan wax walba, ilaa iyo inta aad haysato dongle ama taleefan leh jaakadda dhagaha. Haddii aad u malaynayso in aad maqashay tayo sare oo xoogaa ah, kaliya ku xir dhegahaaga dhegaha ee caadiga ah U beddel Bluetooth. Gabi ahaanba ma jirto sabab aan loo yeelan dhegaha dhegaha iyo taleefoonka bilaa -waayirka labadaba oo aad isticmaasho mid ama kan kale iyadoo ku xiran xaaladda. Ilaa aad dhab ahaantii haysato labo ka mid ah Earpod Bluetooth, waad ku dhegan tahay ikhtiyaar la'aan.
Q1: Waxaan hadda ku iibineynaa Malaysia iyo Koonfur Afrika, laakiin iibku wuu hooseeyaa maadaama aanan weli kor u qaadin, MOQ -ga fiiladaada waa 3000pcs, ma habeyn kartaa laba calaamad iyo laba xirmo oo leh 1500pcs kasta?
J1: Haddii aad haysato 10 dukaan oo leh 5kpcs, dukaan kasta waxaa loo qaybin karaa oo keliya 500pcs, kuma filna, miyaad na siin doontaa xalkaaga ka fiican?
Q2: Waxaan ahay khabiir ku takhasusay shirkadda **, waxaan haystaa macmiil oo hadda ii wakiishay inaan helo alaab -qeybiye madax -weyne. Fadlan ii soo dir faahfaahin dheeraad ah iyo xigashada xogta fiilooyinka/xeedhaha baabuurka.
A2: Ma jiraa shardi astaan ​​caado ah? Haddii aan bixin karno naqshadeynta baakadaha bilaashka ah iyo adeegga xaqiijinta tusaalaha.
Q3: Waa maxay tirada wax soo saarkaaga maalinlaha ah?
J3: Waxaan haynaa 9 khad oo wax -soo -saarka, awoodda wax -soo -saarka caadiga ahna waa 30,000 maalintii.
Q4: Muddo intee le'eg ayay tahay in muunadda la keydiyo?
J4: Caadigu waa 3-7 maalmood
Q5: Intee in le'eg ayay tahay waqtiga wax soo saarka caadiga ah?
A5: 7-10 maalmood
Q6: Waa maxay qaab cusub oo aad leedahay?
J6: 10-15 qaabab cusub ayaa la cusbooneysiin doonaa bil kasta. Waa maxay shuruudahaaga alaabta?
Hore: Qalabka dhegaha ee TWS oo leh baanka korontada
Xiga: Dhegaha Dhegaha ee Wireless Bluetooth oo leh MIC
dhegaha bluetooth stereo wireless